Charlotte Real Estate - Charlotte မူလစာမျက်နှာဝယ် - Charlotte အတွက်အိမ်ဝယ်ယူ
ယူနိုက်တက်စတိတ် မြောက်ကာရိုလိုင်းနား Charlotte
by Addis မြင့်တက်
သငျသညျ Charlotte ရဲ့ရန်ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုရင်အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်သင်မှန်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယူးယောက်မြို့ကနေပါပဲ? ဤမြို့ကိုရဲ့အစားထိုးအများစုထံမှလာဟန်ရှိရာကြောင်းပါပဲ။
Charlotte အမြဲရွှေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏ထိပ်ဆုံးစာရင်း, ဒါမှမဟုတ်အရှိဆုံးလာမည့်မြို့ကြီးများ, ဒါမှမဟုတ်ငယ်ရွယ်ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုပုံရသည်, သင်သည်ဤမြို့ကိုလူမျိုးအဘို့ရှိပါတယ်သမျှသောသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါကသဘာဝကျပါတယ်။ Charlotte နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ၏အားလုံးအကြောင်းကိုကိုချစ်ဖို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Charlotte ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့လူတော်တော်များများကနယူးယောက်စီးတီး, ဘော်စတွန်, Los Angeles မြို့သို့မဟုတ် San Francisco တူသောပိုကြီးတဲ့စျေးကွက်ကနေလာမယ့်နေကြသည်သင်ဖျောပွမြို့ကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရနိုင်အိမ်နှင့်မြေ၏ပမာဏကိုအတော်လေးအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
Charlotte ရဲ့စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းရှေ့ဆက်အမျိုးသားပြန်လည်ကွေး၏အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်စောင့်ရှောက်ထားသည်နှင့်အချို့သောမကြာသေးခင်ကလျှော့ချရှိခဲ့ရဲ့စဉ်ကရပ်တန့်သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤတွင်သင် Charlotte ဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးနေအိမ်ဝယ်ယူရန်သိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုတစ်ဦးလမ်းပြဖြစ်ပါသည်:
Charlotte များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းအားလုံးလျှို့ဝှက်စာရင်းများနှင့်အိမ်ခြံမြေဒေသများအားဖြင့်ပြိုပျက်စျေးကွက်ရှိသည်, သငျသညျ Meyer ပန်းခြံ, Dilworth နှင့် Noda နဲ့တူအမည်များကိုမကြာခဏပေါ်လာတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က, (သင်ဒီမှာမြို့မှာအသစ်တစ်ခုကိုအိမ်မှာ purchasing အကူအညီနဲ့ရှာနေလျှင်ကိစ္စတွင်ပါလိမ့်မယ်) ကိုဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ဘဝတစျခုလုံးနေထိုင်ခဲ့သည့်ဧရိယာသစ်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ပဲ Charlotte သည်အဘယ်အရာကိုမြင်အဝေးကရှာဖွေနေကြပြီမဟုတ်ပါလျှင် အားလုံးအကြောင်းကို, ဤဒေသများ၏နယ်နိမိတ်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လွယ်ကူသောမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီမှာရပ်ကွက်တွေအများကြီးကဒီမှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်အချိန်များတွင်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးရနိုင်သည်။ ဤတွင်သင့်ရဲ့ Charlotte အိမ်သူအိမ်သားအမဲလိုက်စွန့်စားမှုနှင့်အတူကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမြေပုံနှင့်နယ်နိမိတ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
အဘယ်မှာရှိ Begin မှ
သငျသညျထိုဒေသတွင်သစ်နေလျှင်, ငါအလွန်အမင်း, တစ်ရက်ယူသင့်ကားအတွက်ဖွယ်ရှိနေသည်ရုံန်းကျင်မောင်းနှင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ နှစ်သက်ဖွယ်ကြည့်သောရပ်ကွက်သို့မဟုတ် subdivisions သို့ Pull နှင့်၎င်းတို့၏အမည်များကိုရေးချ။
သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်အွန်လိုင်းသုတေသနနိုင်ပါတယ်။ သင်မြင်ပွင့်လင်းအိမ်များတွင်ရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, မည်သည့် Flyer တက် Pick ။ သငျသညျကျောင်းသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, အလုပ်အကိုင်အသင်တို့၏ရာအရပ်မှရပ်ကွက်များနှင့်မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးအဘို့အကောင်းတစ်ဦးခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာတွင်အထူးသင့်အွန်လိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ကူညီလိမ့်မည်ဟု Charlotte အိမ်ခြံမြေ လိုက်. အချို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနေသောခေါင်းစဉ်:
CarolinaHome.com အလားအလာအိမ်မှာဝယ်လက်များအတွက်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်စာရင်းများ featuring အဆိုပါ Charlotte ဒေသဆိုင်ရာ Realtor အစည်းအရုံး၏တရားဝင် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Allen ကကိုတိတ် Realtors
အဆိုပါ Carolina မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံး realtor အုပ်စုအဆိုပါ Allen ကကိုတိတ်ကုမ္ပဏီ 1957 ခုနှစ်စတင်ခဲ့ပြီးယခုမြောက်အမေရိကနှင့်တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားထဲမှာ 1600 ကျော်အပေါငျးအသငျးမြားရှိပါတယ်။ သင်ဤ realtor အသုံးမပြုရင်တောင်သူတို့ရဲ့ website အားလုံးစာရင်းများအပေါ်အလွန်သိကောင်းစရာများဖြစ်ပါတယ်။
Charlotte Observer အိမ်ခြံမြေရှာရန်
ဤသည် format ကိုဧရိယာ, ခရိုင်နှင့်မြို့အားဖြင့်လွယ်ကူသောရှာဖွေဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Charlotte အတွက်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုကိုနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ I-485 ပြီးစီးနှင့် Charlotte Lynx အနီးရှိမြို့ပြင်ဒေသများမှခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများစတင်နှင့်အတူဒါဝေးလံခေါင်သီနှင့်အသစ်အိုးအိမ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအားလုံးမြို့ကိုကျော်တက်လာကြသည်မရှိတော့ဖြစ်ကြသည်။ ရရှိနိုင်သမျှသောအသစ်-built နေအိမ်များကြည့်ဖို့နှစ်ဦးကိုအကြီးအဆိုဒ်များ NewHome ရင်းမြစ်များနှင့် Charlotte နယူးနေအိမ် Directory ကိုဖြစ်ကြသည်။
K. Hovnanian နေအိမ်
Charlotte, North Carolina မှဇူလိုင်လအဖွဲ့၏ 4th
ဘယ်လို Carowinds ကြိတ်စက် Coaster နှုန်းပါသလား
ဂျပန်တွင်အယ် manga ကိုပရိသတ်များအဘို့ဆွဲဆောင်မှု
လန်ဒန်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်ငွေ Save လုပ်နည်း
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံးသဲသောင်ပြင်ရွက်ဖျင်တဲများ 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
သည် Albuquerque ဇွန်လပွဲများပြက္ခဒိန်
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့7အကောင်းဆုံးကလေးများ '' ငါးဖမ်းရိုးစွန်းဒေသများမှ
Houston တွင် Burrito
ဒီတော့ Far 2016 ခုနှစ်တွင်နယူး Milwaukee Stores နှင့်စျေးဆိုင် ...
သင်ကဆီလီကွန်ချိုင့်၌သွားရောက်နိုင်သလား Tech မှဌာနချုပ်
ဘယ်လိုဖေ့စ်ဘွတ် သာ. ကောင်း၏များအတွက်ခရီးသွားပြောင်းခြင်းသည်
အဘယ်မှာရှိကော်လိုရာဒိုအတွက်အဝတ်အချည်းစည်း Go မှ
Minneapolis / စိန့်အတွက်နှစ်သစ်ကူးဧဝက။ ရှင်ပေါလု
2018 ၏9အကောင်းဆုံး Raleigh ဟိုတယ်
Saint-Chapel မှစ. ရုပ်ပုံများနှင့်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်